Sawir qaadista iyo kaamirooyinka sawirada | War gadget
Sinnaba sinaba ma loogu heli karaa degel loogu talo galay adduunka sawir qaadista a meel u gaar ah sawirrada. Sababtaas awgeed, qaybtaan waxaan ku tusi doonnaa boqolaal sawirro kala duwan, nooc kasta leh, qoraa kasta iyo maaddo kasta. Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato tiro badan oo sawirro ah, naftaada ka dhig mid raaxo leh, indhahaaga u kala qaad oo isku diyaari inaad ku raaxaysato.
ka kamaradaha is haysta iyo kuwa ficil-celinta ah (DSLR) Waxay wax ka beddeleen adduunkii sawir qaadista, taas oo suurtogal ka dhigeysa in dhammaanteen aan noqonno sawir qaadayaal run ah, oo awood u leh inaan helno sawirro qaali ah oo u qalma xirfadle haddii aan xakameyno xuduudaha kala duwan ee ay bixiyaan kamaradaha ugu dhameystiran suuqa. Haddii aan dooranno fal-celin, meesha aan ku nagaano ayaan ku yeelan doonnaa yoolalka noocyadiisa kala duwan loogu talagalay duruufo kala duwan. Hadaad rabto inaad ogaato kamaradaha ugu fiican suuqa ama inaad ogaato midka ku habboon baahidaada, Actualidad Gadget ayaa kaa caawin doonta inaad sameyso xulashada saxda ah.
by War gadget samee Bilaha 8 .
Sawiradu waxay noqdeen habka ugu wanaagsan ee lagu dhimi karo safarada, cuntada qoyska, maalmaha dhalashada, xafladaha, maaraynta kaydinta weligeed ...
Qalabka khadka tooska ah ee sawir cad laga dhigo
by Paco L Gutierrez samee 2 sano .
Tifaftirka sawirku waa wax ay gaari karto qofkasta oo haysta mobiil ama kombiyuutar waana tan ...
Sida loo midabeeyo sawirro madow iyo caddaan ah
by Qolka Ignatius samee 2 sano .
Dhamaanteen waxaan leenahay qaraabo da 'weyn, ha ahaadaan ayeeyooyin ama adeero inta badan, kuwaa oo kulmaya taariikh ...
Ku darista goobta sawir
Telefoonada casriga ah ayaa dagaalka kaga guuleystey aflagaado kaameero dhaqameed dhaqameed ah, laakiin si sax ah uma ahan tayada, tayada ...
Leica C-Lux, zoom super compact cusub leh naqshad qurux badan iyo 1-inji shidma
by Ruben gallardo samee 4 sano .
Waa run in suuqa kamaradaha is haysta ay si xoog leh u garaaceen taleefannada casriga ah. Waa…
Canon wuxuu joojiyaa iibinta kamaradeeda ugu dambeysa ee analogga ah
by Eder Esteban samee 4 sano .
Sawirka analogga wuxuu si weyn uga soo dhacaa Canon. Maxaa yeelay shirkadda ayaa ku dhawaaqday inay joojiyeen iibinta ...
Dib u eegida Insta360 Pro
by Nacho Cuesta samee 4 sano .
Suuqa kamaradaha 360 degree ayaa si tartiib tartiib ah caan uga dhex ah dadka isticmaala, hase yeeshe, ...
Kani waa Panasonic LUMIX FT7 cusub, oo ah kamarad loogu talagalay dadka tacaburka
by Qolka Ignatius samee 4 sano .
Shirkadda Japan ee Panasonic, ayaa ku soo biirtay adduunka sawir qaadista, dhowr sano ka hor iyadoo guul la taaban karo ...
Isbarbardhiga kamaradaha casriga ah ee ugu fiican suuqa: Huawei P20, iPhone X iyo Samsung Galaxy S9 +
Heerka sare ee adduunka ee taleefanka gacanta waxaa marwalba hogaamiya Apple iyo Samsung, ...
Olympus PEN E-PL9 wuxuu si rasmi ah u yimid Mareykanka
Dhowr bilood ka hor ayaan kaaga sheegnay kamaradaha cusub ee Olympus. Tani waa noocyada 'Olympus' ...
GoPro Hero, shirkaddu waxay soo bandhigeysaa kamaradeeda waxqabadka ee ugu fudud
GoPro, sumcadda caanka ah ee Waqooyiga Ameerika ee kaamirooyinka waxqabadka ayaa soo bandhigtay qaabkeedii aasaasiga ahaa ee aasaasiga ahaa ee laga soo qaatay buuggeeda gaarka ah. Waan ogahay…
Tuur waxyaabahaaga iPhone-ka ah TV-ga adigoon Apple TV haysan
Sida loogu xiro kamaradda Canon PowerShot ama IXUS Wi-Fi kamarad casriga ah
ISO, ASA iyo DIN